Sidee Loogu Shaqeeyaa Cinwaanada Cinwaanka Youtube? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Sidee loo kicin karaa cinwaanada 'YouTube'?
Waxaa laga yaabaa 12, 2021 0 comments 518
Dhaqaaq subtitles-ka fiidiyoo lagu soo duubay YouTube waa wax toosan. Haddii aadan aqoon sida loo sameeyo, ha ka welwelin. Waxaan ku bari doonnaa wax walba oo ku saabsan aaladdan xiisaha leh ee ku jirta madal cajalad fiidiyoow ah oo noo oggolaaneysa inaan ku eegno waxyaabaha ku qoran luqad kale.
Subtitles on YouTube kaliya uma adeegaan fahmaan fiidiyowyadaas oo ku qoran luqado kale laakiin sidoo kale waa ikhtiyaar aan caadi ahayn oo loogu talagalay kuwa qaba nooc ka mid ah maqalka naafada ah. Maanta waxaan ku tusineynaa habka ugu fudud uguna dhaqsaha badan ee aad shaqadan uga kicin karto PC ama APP.
Maxay subtitles muhiim ugu yihiin YouTube-ka?
Dad badan oo adeegsadayaal ah ayaan wali fahmin muhiimadda ay u leeyihiin subtitles ka dhex jira barta YouTube-ka. Waxay waxtar u yeelan karaan daqiiqadahaas marka aan dooneyno inaan ku ciyaarno fiidiyoow luqad kale ama si fudud markaan joogno meel buuq badani ka jiro halkaas oo aan macquul ahayn in la maqlo codka fiidiyaha.
Subtitles sidoo kale way awoodaa noqo bedel fiican xaaladaha aan ku jirno meelaha banaan ee aan dhawaqa fiidiyowyada aan lagu maqli karin ama aan lagu maqli karin heer sare.
Sabab kasta ha noqotee, muhiimaddu waa taas Youtube waxay na siisaa ikhtiyaar aan ku dhaqaajino subtitles-ka. Nidaamka loo sameynayo waa mid fudud oo dhaqso badan, tan ugu fiicanna waa inaan awood u yeelan doonno inaan ka soo abaabulno kombuyuutarka ama xitaa barnaamijka moobiilka.
Ka hawlgal subtitles ka PC
Si aad uga hawlgeliso cinwaanada tooska ah YouTube-ka kombiyuutarkayaga Waxaan kaliya u baahanahay kombiyuutar leh xiriir internet. Looma baahna in la soo dejiyo barnaamijyo ama barnaamijyo kale. Waa kuwan tallaabooyinka ay tahay inaan raacno:
Furan Youtube ka biraawsarkaaga kombuyuutarka adoo galaya youtube.com
Raadi fiidiyowga aad rabto inaad ciyaarto
Guji astaanta "Qalabaynta”Taasi waxay u muuqataa xagga hoose ee daaqadda loo maqli karo.
Dooro midka ugu habboon marka loo eego luqadda
Diyaarso. Fiidiyowgu wuxuu hadda yeelan doonaa cinwaanno hoose oo daaran
Hadday rabto dami subtitles Fiidiyowga, waa inaad ku celcelisaa mid kasta oo ka mid ah talaabooyinka kor lagu sharaxay oo uncheck ka "santuuqa" sanduuqa:
Daar subtitles ka qalab macruufka ah
Nidaamka lagu dhaqaajinayo cinwaanada qoraalka qalab macruufka ah sidoo kale waa wax fudud. Haddii aadan weli aqoon sida loo sameeyo, fiiro gaar ah u yeelo tallaabada tallaabo ah ee ay tahay inaad raacdo:
Furan Youtube qalabkaaga iOS
Degmooyinka oo fiidiyowga aad dooratay
dhagsii kor ku xusan saddexda dhibcood ee taagan ee ka muuqda geeska kore ee midig ee shaashadda.
Guji halka fursadaha cinwaan (CC) oo xulo sida ugu habboon sida ku qoran luqadda.
Ka hawlgal subtitles barnaamijka Android
Laga soo bilaabo codsiga mobilada YouTube loogu talagalay Android sidoo kale waa suurtagal in la dhaqaajinayo cinwaanada fiidiyow kasta:
Furan codsiga Youtube ee mobilkaaga
Raadi iyo soo saar fiidiyowga aad doorbidayso
dhagsii saddexda qodob ee taagan (geeska kore ee midig)
Xulo xulashada “Subtítulos"
1 Maxay subtitles muhiim ugu yihiin YouTube-ka?
2 Ka hawlgal subtitles ka PC
3 Daar subtitles ka qalab macruufka ah
4 Ka hawlgal subtitles barnaamijka Android
Waxa kale oo aad xiiseyn kartaa:
Soo Iibso Raacista
Waraaqaha loogu talagalay Instagram si loo gooyo loona dhejiyo
Sidee loo sameeyaa calan Youtube ah?
Sidee loo adeegsadaa qaabka qarsoon ee YouTube-ka?
Boostada ka dib